China 409 409L inotonhora yakasungirirwa simbi machira ekugadzira uye Fekitori Huaxiao
Simbi isina kuchena ye409 inowedzera Ti zvemukati zvichienzaniswa neyese isina simbi simbi, inova yakanakisa mukuwisira kuita uye kugadzirisa. Iyo inowanzo shandiswa mumotokari pombi yekudzimisa, midziyo, zvinopisa zvinopisa uye zvimwe zvigadzirwa zvisingade kurapwa kwekupisa mushure mewelding. 409L ine yakaderera kabhoni yezvinyorwa pane 409 simbi isina simbi uye iri pamusoro mukumisa ngura uye weldability.
Sino Stainless Simbi Kugona nezve 409 409L inotonhora yakakungurutswa masimbi esimbi, 409 409L CRC
409 Yakaenzana giredhi kubva kune akasiyana nyika muyero
409 Chemical Chikamu:
C：.00.08 ，Si ：≤1.0 Mn ：≤1.0 ， S ：.00.03 ，P ：.00.045, Kr ：10.5～11.7 ，Ni ：0.5 Max，
409 Mechinzvimbo Pfuma:
Tensile simba:> 380 Mpa
Kukwidziridzwa (%):> 20%
Kukotama Angle: 180 dhigirii
409L Same giredhi kubva kune akasiyana nyika muyero
409L Chemical Chikamu:
C：.00.03 ，Si ：≤1.0 Mn ：≤1.0 ， S ：.00.03 ，P ：.00.045, Kr ：10.5～11.7 ，Ni ：0.5 Max，
409L Mechanical Imba:
Tsananguro nezve yakajairwa simbi isina tsvina machira
Stainless simbi haikonzere ngura, kurova, ngura kana kusakara. Stainless simbi ndeimwe yeakasimba zvinhu pakuvaka simbi zvinhu. Nekuti isina simbi ine yakanaka ngura kuramba, iyo inogonesa chimiro chimiro kuchengetedza zvachose hunijiniya kutendeka. Chromium-ine simbi isina simbi inosanganisawo masimba emagetsi uye kuwedzera kukuru, zvichiita kuti zvive nyore kumakina zvikamu kusangana nezvinodiwa zvevakagadziri uye vagadziri vezvivakwa.
Kushanda nezve Stainless simbi jira
Zvizhinji zvezvinodikanwa zvekushandisa ndeyekuchengetedza iyo yekutanga kuoneka kwechivako kwenguva yakareba. Pakusarudza mhando yesimbi isina chinhu kuti ishandiswe, zvinonyanya kutariswa ndiwo anodikanwa eesthetic zviyero, hunhu hunoparadza hwenzvimbo yemhepo, uye nzira yekuchenesa inoshandiswa. Nekudaro, kuwanda uye kwakawanda kunyorera kuri kungotsvaga kuomesa kuvimbika kana kukwana kwemvura. Semuenzaniso, denga uye mativi emadziro ezvivakwa zvemabhizimusi Mune izvi zvinoshandiswa, mutengo wekuvaka muridzi unogona kunge wakakosha kudarika aesthetics, uye pamusoro haina kunyatso kuchena. Iko kushandiswa kwe304 simbi isina simbi munzvimbo yakaoma yemukati inoshanda zvine mutsindo. Nekudaro, mumaruwa nemaguta kuti vachengetedze kutaridzika kwavo kunze, vanofanirwa kucheneswa kazhinji. Munzvimbo dzine maindasitiri dzakasviba zvakanyanya uye nzvimbo dziri mumahombekombe egungwa, pamusoro pacho panogona kunge paine tsvina zvakanyanya uye kunyange ngura Nekudaro, kuitira kuti uwane anesthetic mhedzisiro mune yekunze nharaunda, nickel-ine isina simbi simbi inodikanwa. Naizvozvo, 304 simbi isina waya inoshandiswa zvakanyanya mumaketeni madziro, madziro emumativi, matenga uye kumwe kushandiswa kwekuvaka, asi mune ane hukasha maindasitiri kana emumakungwa emuchadenga, 316 simbi isina waya inosarudzwa. Zvakanakira kushandisa simbi isina chinhu mukuumbwa kwekuvaka zvino zvazivikanwa. Kune akatiwandei dhizaini mirayiridzo inosanganisira 304 uye 316 simbi isina simbi. Nekuti "duplex" simbi isina tsvina 2205 ine yakanakira kuramba kumhepo yemuchadenga uye yakasimba tensile simba uye elastic simba, iyi simbi inosanganisirwawo mumirayiridzo yeEuropean. Muchokwadi, simbi isina waya inogadzirwa mune yakazara-yakaenzana masimbi esimbi uye saizi, uye kune akawanda akakosha maumbirwo. Zvigadzirwa zvinonyanya kushandiswa zvinogadzirwa nesheet uye strip simbi, uye zvigadzirwa zvakasarudzika zvinogadzirwa kubva pakati nepakati uye zvinorema ndiro, semuenzaniso, inopisa-yakakunguridzirwa masimbi esimbi uye nesimbi yakaumbwa. Kune zvakare akakomberedza, elliptical, square, rectangular uye hexagonal welded kana isina musono machubhu esimbi uye mamwe marudzi ezvigadzirwa, kusanganisira ma profiles, mabara, waya uye castings.
Pashure: 316L316 Cold Yakakungurutsirwa Isina Simbi machira (0.2mm-8mm)
Zvadaro: 410 410s inotonhora yakakungurutswa masimbi esimbi
Cold Yakakunguruswa Isina Sheet Sheet
Cold Yakakungurutsirwa Isina Sheet Sheets
Stainless Simbi Cold Yakapetwa Sheet